တရုတ်နိုင်ငံတွင် စျေးပေါသော စမတ်အလိုအလျောက် ပြန်ပိတ်ကိရိယာသည် အခမဲ့နမူနာကို ပေးသည်။
1. Smart Automatic Recloser ၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
Smart Automatic Recloser သည် စမတ်ကျသော ပါဝါသုံးစွဲမှုနှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အတွက် တည်ဆောက်ထားသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Smart Automatic Recloser သည် သမားရိုးကျ circuit breaker ၏ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန် အီလက်ထရွန်းနစ်နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသည့် အရာများ၏ အင်တာနက်အတွက် အသိဉာဏ်ရှိသော circuit breaker တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် အဝေးထိန်း ON နှင့် OFF ထိန်းချုပ်မှု၊ ဒေသန္တရမုဒ်ရွေးချယ်မှု၊ အချိန်ကိုက် ON နှင့် OFF ဆက်တင်များ စသည်တို့ပါရှိသည်။
2. Smart Automatic Recloser ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များ
-Local ထိန်းချုပ်မှု- ဒေသတွင်း ON နှင့် OFF၊ မုဒ်ရွေးချယ်မှု။
3. Smart Automatic Recloser ၏ ပင်မနည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်
တိုင်နံပါတ် 1P၊ 2P၊ 3P၊ 4P
လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100A
စက်မှုသက်တမ်း (0 ~ C) တစ်သောင်းနှစ်ထောင်
ပြတ်တောက်နေသော လက်ရှိ lcs=lcuâ‰¤6000A lcs=lcuâ‰¤6000A
ထိန်းချုပ်မှုမုဒ် manual နှင့် အလိုအလျောက် စမတ်ထိန်းချုပ်မှု
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား 220/230V 380/400V
ခလုတ်တိုက်ခြင်း လက္ခဏာများ Type C က ချက်ချင်း ခရီးထွက်တယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် - 40ºC~70ºC – 40ºC~70ºC
hot Tags:: Smart Automatic Recloser၊ တရုတ်၊ စျေးသက်သာသော၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းချမှု၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့တွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်